FITATERANA AN-TANETY : Zotra amina lalam-pirenena miisa fito no niverina amin’ny laoniny
Zotram-pifamoivoizana amina lalam-pirenena miisa fito, izay mampifandray Faritra sy Distrika maro no niverina soa aman-tsara amin’ny laoniny, omaly, rehefa niato tao anatin’ny fotoana naharitra. 16 septembre 2020
Vao maraina dia nifanaretsaka ireo mpandeha teny anivon’ireo toby fiantsonana isan-karazany, izay efa sasa-niandry ny fisokafan’ny lalana mba hahafahana mamonjy ireo havana aman-tsakaiza. Anisan’ireo niverina nisokatra omaly ny lalam-pirenena faha-6 mihazo an’Antsohihy, ny lalam-pirenena faha-5 izay mampifandray ny Distrikan’i Toamasina sy i Fenoarivo Atsinanana. Efa azo ivezivezen’ny fiara ihany koa ny lalam-pirenena faha-44 izay mampitohy an’Antananarivo sy ny Distrikan’Ambatondrazaka, ny lalam-pirenena faha-25 mankany amin’ireo Distrika mandrafitra ny Faritra Vatovavy Fitovinany ary ny lalam-pirenena faha-10 sy faha-13 mankany amin’ny Faritra Androy sy Anôsy.
Ankoatra ireo dia efa azo ivezivezena tsara ny lalam-pirenena faha-4 mankany Mahajanga izay isan’ireo niverina nisokatra, omaly. Ho an’ity farany manokana dia nifanotofana ny taksiborosy nankany Mahajanga, hoy ireo mpitatitra. Niteraka fitohanan’ny fiara teny amin’ny faritra manodidina an’Andranomena mipaka hatrany Talatamaty ny fiverenan’reo taksiborosin’i Mahajanga miasa indray. Tsy maintsy nohajaina tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana na ho an’ireo mpandeha izany na ho an’ny mpitatitra. Miampy ireo fihetsika fanakanana maro isan-karazany, toy ny fitondrana arom-bava sy orona sy ny fanasana tanana dia tsy maintsy ataon’ireo mpandeha ihany koa ny manao famandrihan-toerana amin’ny antso an-tariby. Tsy maintsy raisina ny momba ny mpandeha rehetra miaraka amin’ny dika mitovin’ny karapanondro.
Ny tale jeneralin’ny sampan-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety, ny jeneraly Reribake Jeannot dia nijery ifotony izay fiverenan’ireo taksiborosy mihazo ny lalam-pirenena miasa izay. Nosafidiany tamin’izany ireo izay mihazo ny lalam-pirenena faha-4. Nohamafisiny hatrany ny maha-zava-dehibe ny fanarahana an’ireo fepetra ara-pahasalamana indrindra fa ny fakana ny mombamomba an’ireo mpandeha.